Ogaden News Agency (ONA) – Ururka OYSU-Denmark oo Shir Balaadhan Qabtay
Ururka OYSU-Denmark oo Shir Balaadhan Qabtay
Waxaa shalay ooy taariikhdu ahayd 29/6/2013, laguqabtay magaalada Odense ee wadanka Denmark shirwayne ay siwanaagsan usoo abaabuleen Ururka Midowga Dhaliyrada iyo Ardayda Ogaadeeniya ee OYSU unugtiisa wadanka Denmark. shirkaas oo looga gollahaa warbixin kusaabsan waxqabadkii OYSU- guud ahaan iyo gaar ahaan waxqabadka OYSU-DK. Sidoo kale waxaa shirwaynahan lagu xusay sanad guuradii 3aad ee kasoo wareegtay aas aaskii urur-waynaha OYSU oo lamideeyay 27/6/2010. Munaasabada Shirkan waxaa kasoo qaybgalay xubnaha & masuuliinta OYSU-DK faracyadeeda kala duwan, hawl-wadeenka Jaaliyada Somalida Ogadenia, Madax katirsan Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia iyo waliba marti sharaf kale oo kasoo qayb gallay shirwaynahan sida wanaagsan loo soo agaasimay.
Waxaa kamid ahaa marti sharafta misaanka culus leh ee OYSU-Denmark nasiibka uheshay inay munaasabadan shalay dhacday kala qayb qaataan Mudane Cabdullahi Xussein (C/laahi Cakaara) oo lasoo shaqeeyay mudo 3sano ah gacanyaraha gumaysiga Itoobiya ee horjoogaha ooga aha wadanka Ogadenia. Wuxuu Mudane Cabdullaahi si faahfaahsan ooga waramay borobagaandaha iyo siyaasada maldahan ee gumaysiga Itoobiya kula dhaqanto shacabka Somalida Ogadenia isagoo gumaysigu u adeegsado dhibaataynta iyo gumaadka shacabka wakiilada Ogadenia uqaabilsan ee hormuudka uyahay Cabdi Iley (Cabdi Ubbo). Mudane Cabdullahi Xussein wuxuu kasoojeediyay madasha shirka warbixin aad umurugo badan oo dhaqaajisay dareenka iyo damiirka dadwaynihii shirka kasoo qaybgallay. Waxaa kale oo Mudane C/lahi uu siwaafi ah ooga waramay qaabka loola dhaqmo dadka isku magacaabay Qurbo Joogta ee gumaysigu u,adeegsaday qaab bahdilaad iyo kutumasho xuquuqda banii,aadamka kabaxsan.
Dhanka kale waxaa kamid ahaa masuuliintii JWXO ee munaasabada shirkan kahadashay General Cabdullahi Mukhtaar, Lataliyaha Gudoomiyaha JWXO. Wuxuu Janaraalku siqoto dheer leh ooga waramay marxalada halganka Ogadenia uu maanta marayo iyo ajendeyaasha horyaala madaxda sare ee halganka Ogadenia. Wuxuu Gen. Cabdullahi Mukhtaar si waafi ah ooga jawaabay dhamaan su,aalihii kusaabsanaa geedi socodka halganka iyo dareenka shacabka Somalida Ogadenia.
Waxaa kale oo munaasabadan si wanaagsan ooga hadashay Marwo Istaahil Xirsi Mahad oo kamid ahayd marti sharaftii katimid wadanka Sweden ee shirkan lagu martri qaaday. Marwo Istaahil waxay muuqaal wanaagsan kabixisin kaalinta ay Hooyooyinka Ogadenia kaga jiraan Halganka Shacabka S.Ogadenia oogu jiro sidii xorriyad buuxda uheli lahaayeen isla markaana iskaga tuuri lahaayeen heeryada Gumaysiga. Waxaa isaguna wacdi diini ah oo aad uwanaagsan kasoo jeediyay kulankan Shekh Xasan Cabdulahi.
Munaasabadan ayaa kusoo gabagabawday jawi aad uqiimo badan iyadoo dhamaan kaqaybgaleyaashii oo idil ay siwanaagsan ooga faa,iidaysteen warbixinadii iyo guud ahaan baraamijtii ay dhalinyadu kusoo bandhigeen munaasabadan taariikhiga ah.